सन्दिपलाई नखेलाएपछि चेन्नाईले दिल्लीलाई दियो १८० रनको लक्ष्य, के उक्त लक्ष्य दिल्लीले भेटाउला त ? |
सन्दिपलाई नखेलाएपछि चेन्नाईले दिल्लीलाई दियो १८० रनको लक्ष्य, के उक्त लक्ष्य दिल्लीले भेटाउला त ?
२०७७, १ कार्तिक शनिबार २१:२३ October 17, 2020 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौँ । इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) अन्तर्गत चेन्नई सुपर किंग्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाई १८० रनको लक्ष्य दिएको छ । टस जितेर पहिला ब्याटिंग गरेको चेन्नईले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाउदै १७९ रन बनाएको हो ।
चेन्नईका लागि फाफ डुप्लेसिसले सर्बाधिक ५८ रन बनाए । त्यस्तौ अम्बाती रायडूले अविजित २५ बलमा ४५ रन बनाए भने शेन वाटशनले ३६ रन बनाएका थिए । त्यसैगरी रविन्द्र जडेजाले अविजित १३ बलमा ३३ रन बनाए भने कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ३ रन र साम कुरान शुन्यमा आउट भएका थिए । दिल्लीका बलर एनरीच नोर्त्जेले २ विकर लिए भने तुषार देशपाण्डे र कागीसो रबाडाले एक एक विकेट लिएका थिए ।
यद्यपि हालसम्म दिल्लीले खेलेका आठवटै खेलमा मौका नपाएका सन्दीप नवौं खेलमा पनि बेन्चमा नै रहेका छन् । आजको खेलमा दिल्लीले कुनै परिवर्तन गरेको छैन । दिल्लीले हालसम्म खेलेका ८ खेलमध्ये ६ मा जीत हात पारेको छ भने दुईमा पराजित भएको छ । त्यसैगरी चेन्‍नईले समान खेलमा ३ जीत निकाल्दा पाँचमा हार व्यहोरेको छ ।
दिल्ली क्यापिटलहरू: पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, एलेक्स क्यारी (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, तुषार देशपांडे, कागिसो रबाडा, एनरिक नोर्त्जे।
चेन्नई सुपर किंग्स: फाफ डु प्लेसिस, शेन वाटसन, अंबाती रायडू, एमएस धोनी (विकेटकीपर र कप्तान), केदार जाधव, रवीन्द्र जडेजा, साम क्रेन, ड्वेन ब्रावो, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, कर्ण शर्मा।